निश्चलकै बाटोमा प्रदीप ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
निश्चलकै बाटोमा प्रदीप ?
फिल्मी फण्डा । नेपाली फिल्ममा ट्रेण्ड ब्रेकर फिल्म मानिन्छ लुट । यसै फिल्म निर्देशन गरेर ट्रेण्ड ब्रेकर निर्देशकको रुपमा स्थापित भए निर्देशक निश्चल वस्नेत । सन् २०१२ मा प्रदर्शनमा आएको फिल्मको बाटो पछ्याउँदै धेरै फिल्महरु बने । निश्चल आफै पनि अन्य फिल्महरुमा लुटमा जत्तिको खह्रो उत्रन सकेका छैनन् । जेठ ३ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म जात्रै जात्राले सकरात्मक प्रतिक्रिय पाइरहेको छ । फिल्मले हरेक कोणबाट ग्रीन सिग्नल पाइरहेको छ ।
फिल्म प्रचारको लागि जात्रै जात्रा टिम भृकुटी मण्डमपमा चलेको ओटाकु जात्रा २०१९ मा पुगेका थिए । फिल्मका निर्देशक प्रदीप भट्टराईले निश्चल वस्नेतले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा ट्रेण्ड ब्रेकर फिल्म बनाएको र त्यसकै शैलीमा जात्रा बनाएको बताए । फिल्म जात्राको सिक्वेलको रुपमा जात्रै जात्राको निर्माण भएको हो । निश्चलले सफल रुपमा ह्याट्रिक गर्न त सकेनन् तर, प्रदीपले सफल निर्देशकको रुपमा ह्याट्रिक गर्न सफल रहे । निश्चलको ट्रेण्ड ब्रेकर फिल्म चाँही कहिले बन्ने हो ।